Dhaawacyo ku batay Liverpool - BBC News Somali
Dhaawacyo ku batay Liverpool
6 Jannaayo 2016
Image caption Philippe Coutinho ayaa kamid ah ciyaartooyda dhaawacmay.
Maamulaha Liverpool, Jurgen Klopp, waxaa uu qirtay inay khasab ku noqonayso inuu suuqa kala beddelashada ciyaartoyda galo kaddib markii ay sii xumaatay xaaladda ciyaartoyda naadiga ee dhaawacyadu soo gaareen ciyaartii ka tirsanayd League Cup ee semi-final-ka ay la ciyaareen kooxda Stoke.
Philippe Coutinho iyo Dejan Lovren ayaa garoonka uga baxay dhaawacyo lugaha ka gaaray iyadoo Kolo Toure uu ciyaartaas ku dhammaystay dhaawac noocaas oo kale ah, taas oo ay 1-0 uga badiyeen kooxda Stoke.
Klopp waxaa uu hore u sheegay inuusan bishan Jannaayo ciyaartoy iibsan doonin.
Laakiin kaddib ciyaartii shalay waxaa uu sheegay in arrintani tahay mid loo baahan yahay inay ka fekerayaan.
Liverpool ma haysato ciyaartoy difaac dhexda uga dheela iyadoo laacibka Lovren uu ku biiray Martin Skrtel iyo Mamadou Sakho oo dhaawac ku maqan, halka Toure ay dhib ku noqotay inuu ciyaarta dhammaysto.
Maamule Klopp waxaa uu yiri "laba toddobaad kahor waxaan haysannay saddex ciyaartoy oo difaaca dhexe ka dheesha, taas oo ah xaalad wanaagsan, xilli-ciyaareedkuna waxaa uu ku bilawday shan khadka dhexe laakiin hadda waa eber."